अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न | Artha News Nepal
Home	ऊर्जा	अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न
अरूण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न
किमाथांका – संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । परियोजनाले नदीको पानी डाइभर्सन गर्न ४२९ मिटरको सुरुङ मार्गसमेत निर्माण गरिसकेको छ ।
परियोजनाले सोमवार सुरुङतर्फ फर्काउने सबै तयारी पूरा गरेको सतलज कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले जानकारी दिए ।
परियोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । अरुण नदीको पानी थुनेर आज (सोमवार) सुरुङतर्फ फर्काइने छ ।
बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत्गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माणको काम चौबीसै घण्टा तीव्र गतिमा चलिरहेको परियोजनाले जानकारी दिएको छ । बाँधस्थलमा जयप्रकाश एशोसियटस निर्माण कम्पनीले तथा विद्युत्गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्टले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् ।
परियोजनामा अहिले भारतीय र नेपालीसहित तीन हजार कामदार छन् । फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११ दशमलव ७४ किमी छ ।
प्रियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बर भित्रै काम सम्पन्न हुनेछ । परियोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारको समेत सकारात्मक सहयोग रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । यन्त्र राख्न १६ हजार ७०० घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार ४०० घनमिटर सुरुङ खनिएको छ । पाइलट होल ९० मिटर खनिएको छ ।
रू. एक खर्ब ४४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपाललाई २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव १ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाइने र विभिन्न शीर्षकमा रू. तीन खर्ब ४८ अर्ब आर्थिक लाभ लिनेछ ।
परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीले रू. एक अर्ब ६० करोडको शेयर पाउनाका साथै प्रतिमहीना ३० युनिट विद्युत् प्राप्त गर्नेछन् । परियोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत् र आयकर गरी रू. तीन खर्ब ४८ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान छ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पिडिएमा उल्लेख गरिएको छ ।
अरूण तेस्रोजलविद्युत् परियोजनानिर्माणनिर्माण कार्य